Wararka ugu dambeeyay dagaal aad u culus oo ka dhacay deegaanka Dumaaye ee gobolka Mudug – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararka ugu dambeeyay dagaal aad u culus oo ka dhacay deegaanka Dumaaye ee gobolka Mudug
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helaayo dagaal aad u culus oo u dhaxeeya dagaalyahanada Al-shabaab iyo dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka Dumaaye ee koonfurta gobolka Mudug ayaa sheegaya in hadda uu dagaalkaasi joogsaday islamarkaana ay xaaladda tahay mid caadi ah.
Dagaalkaan oo saakay aroortii ka qarxay deegaanka Dumaaye ee hoos-timaada degmada Xaradheere ayaa la sheegayaa inuu bilawday kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weerar seddax geesood ah kusoo qaadeen dadka ku nool deegaanka Dumaaye.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka uu geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac, iyadoona dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka Dumaaye ay qeylo dhaan u direen maamulka Galmudug.
Dadkaasi ayaa ka dalbaday maamulka Galmudug inay usoo gurmadaan islamarkaana gacan lagu siiyo la dagaalanka Al-shabaab oo inta badan dadka shacabka ah ku caburiya deegaanada ay gacanta ku haayaan.
Dhaawacyadda dadkaasi ayaa la sheegayaa inay ku go’doonsan yihiin duuleedka deegaanka Dumaaye, iyadoona meeshii dhaawacyadaasi la marin lahaa ay weli ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-shabaab.
Dhinaca kale, kulamo kala duwan ayaa hadda ka soconaya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, kaas oo looga hadlaayo sidii gurmad ciidan loogu diri lahaa deegaanada ay saakay dagaaladu ka dhaceen, mana jirto wax war ah oo ilaa iyo haatan kasoo baxay maamulka Galmudug.
Si kastaba, dagaalkaan ayaa la sheegayaa inuu daba-socdo dagaal gelinkii dambe ee shalay deegaanka Dumaaye ku dhexmaray dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab iyo dadka deegaanka halkaasi.
Dagaalkaasi ayaa sida la sheegay yimid kadib markii ay Al-shabaab dadka deegaanka Dumaaye ka dalbadeen inay si qasab ah ku bixiyaan waxay ku sheegeen lacag Zakawaat ah, taas oo ay dadkaasi ka biyo diideen inay fuliyaan dalabkaas.